34 Slackware နောက်ခံပုံများ | Linux မှ
34 Slackware Wallpapers
ဤသည်မှာပထမဆုံးရေးသားချက်မဟုတ်ပါ နောက်ခံပုံများ ငါတို့ထားခဲ့တယျ၊
နောက်ခံပုံတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်များများစားစားရှာရတာလဲဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ် Slackware ကိုတီထွင်နှင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်တည်ရှိသည် ... ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချိခဲ့သောဤ distro ၏နောက်ခံပုံများမှာအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပမာဏကိုချန်ထားခဲ့ရတာပါ Slackware နောက်ခံပုံများ, သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထံမှကူးယူခဲ့သောနောက်ခံပုံများ🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » 34 Slackware Wallpapers
ဒီအတွက်ငါ pack ကို upload လုပ်ရမယ်။ ငါတို့နိုင်ငံမှာအင်တာနက်ဘယ်လောက်မြန်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါနောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရထားတယ် have
wget နှင့်&&…ကိုတစ်လိုင်းတည်းဖြင့် အသုံးပြု၍ သင် download လုပ်ရန်ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူသည်။
you Slacky ကို uninstall လုပ်ပြီးတဲ့အခါမင်းက wallpapers ကိုအရမ်းရယ်ရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကောင်းသော! ငါနောက်မှ Slack ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်!
ဟားဟားဟားဟား… .. ခဏလေးနောက်ကျတယ်… LOL !!!
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့် linux distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ Arch နှင့်အတူအဆင်ပြေပါသည်။ ရိုးသားစွာကျွန်ုပ်သည်ရွေ့လျားလိုသောဆန္ဒကိုမတွေ့ရပါ၊ အနာဂတ်တွင် KISS အတွေးအခေါ်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! 😀
ဒါဟာမှန်ပါတယ် ... အမြဲတမ်း Slackware အနည်းငယ်။ သူတို့ကဒေသခံကိုလာကြတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နှင့်သင်၏အဆွေခင်ပွန်း!
မှတ်ချက်များပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဂုဏ်ယူခြင်း by ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဤတွင် (နှင့်ငါတို့အရင်ပြောခဲ့ဖူးသည်) ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သော distros တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်ဆောင်းပါးများကိုရေးသားသည့်သာမန်ဘလော့ဂ်မဟုတ်ပါ။ ပိုဆိုးသည်မှာ Ubuntu ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုအမြဲတမ်းရေးသည်။ လူတိုင်းကိုကျေနပ်အောင်ကြိုးစားပါ၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲ
<° Gamers: Linux တွင်ဇာတိငလျင်လှုပ်သည်
RT kernel ကိုသုံးခြင်း (latency low)